စီးပွားရေး ၀ ယ်ယူမှုအားလုံးအပေါ် ၉၅% ငွေပြန်အမ်းရန်
“ Cash Back Business Credit Card” ကို သုံး၍ သင်ဝယ်ယူသောပစ္စည်းတိုင်းအတွက် ၉၅% ငွေပြန်ဆပ်နိုင်ပါသည်။
'Cash Back Business Credit Card' သည်သင်၏စီးပွားရေးအတွက်မကြာခဏ ၀ ယ်ခြင်းများနှင့်နေရာတိုင်း၌နေရာတိုင်း၌အကန့်အသတ်မရှိ (သို့) အမျိုးအစားကန့်သတ်ချက်မရှိသောငွေပြန်အမ်းငွေကို 95% ရရှိရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်သည် 'Cash Back Business Credit Card' ကို အသုံးပြု၍ သင်ဝယ်ယူသောသို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုင်းအတွက် ၉၅% cashback ရရန်သင် ၁၀၀% အာမခံချက်ရှိသည် WTE.
ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများအပေါ်တွင်ကန့်သတ်ချက်များမရှိပါ
သင်သည်မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ထောက်ပံ့မှုများကိုသန်းပေါင်းများစွာသောကုမ္ပဏီများမှ ၀ ယ်နိုင်သည် ၂% ရ သင်လုပ်သမျှဝယ်ယူမှုအတွက် cashback.
ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်ယနေ့နှင့်အတူအိမ်တအိမ်ဝယ်လျှင် 'Cash Back Business Credit Card', သင်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည် ပြန်ရ ၉၅% သင့်ရဲ့အသုံးစရိတ်၏။ အကယ်၍ သင်သည်ယနေ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ၊ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၊ စက်ယန္တရားများ၊ ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ 'Cash Back Business Credit Card', သင်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည် ပြန်ရ ၉၅% သင့်ရဲ့အသုံးစရိတ်၏.
သင် ၀ ယ်နိုင်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများ
“ Cash Back Business Credit Card” သည်သင်မည်ကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သည်ဖြစ်စေသင်ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သောစျေးဝယ်ခြင်းအတွက်သင့်အားဆုချသည်။ ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံအသစ် (စက်ယန္တရား၊ စက်ပစ္စည်းများ၊ နည်းပညာ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံတစ်ခုလုံး၊ သတ္တုတွင်း၊ အလှည့်ကျစက်ရုံစသည်တို့) သို့မဟုတ်အခြားထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်များကို ၀ ယ်ရန်သင်ငွေဖြုန်းသောအခါသင်သုံးစွဲသောငွေ၏ ၉၅% သည်သင်ထံသို့ပြန်လာသည် 'cashback' သည်သင်ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သောစျေးဝယ်ခြင်းအတွက်မက်လုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်စျေးဝယ်သည့်နေရာတိုင်း၊ သင်မည်သည့်နေရာတွင်မဆို၊ အကန့်အသတ်မရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိသောသင်၏မကြာခဏစီးပွားရေး ၀ ယ်ယူမှုများအားလုံးတွင်တူညီသောငွေသား (၉၅%) ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အကန့်အသတ်မဲ့သို့မဟုတ် ၉၅% ငွေသားဝယ်ယူမှုတိုင်းတွင်နေရာတိုင်း၊ အကန့်အသတ်မရှိ၊
Cash Back Business Credit Card ၏အကျိုးကျေးဇူးများ '
အကန့်အသတ်မရှိ ၉၅% စီးပွားရေး ၀ ယ်ယူမှုများမှငွေပြန်အမ်းခြင်း - သင်၏စီးပွားရေးအတွက်အကန့်အသတ်မရှိ (သို့) အမျိုးအစားကန့်သတ်ချက်မရှိသောနေရာတိုင်း၊ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ၀ ယ်ယူမှုတိုင်းတွင်သင်၏စီးပွားရေးအတွက်အကန့်အသတ်မရှိငွေပြန်ရရှိနိုင်သည်
ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများကိုကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။ B2B cashback ကဒ်ကိုသင်ဝယ်ယူနိုင်သောကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများကိုကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။ သင်မကြာခဏ ၀ ယ်ယူသည့်စီးပွားရေး ၀ ယ်ယူမှုများအားလုံးတွင်တူညီသောငွေသား (၉၅%) ရရှိမည်ဖြစ်သည် WTE), ကန့်သတ်မရှိနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများကိုစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိ။
သင့်ရဲ့ကန့်သတ်အထက်, ကျော်ကန့်သတ်အခကြေးငွေနှင့်အတူဖြုန်း: သင်၏အကြွေးကန့်သတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်၍ ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်အကန့်အသတ်မရှိအခကြေးငွေမလိုအပ်ဘဲ ၉၅% ငွေပြန်အမ်းငွေများရရှိရန်လွတ်လပ်မှုကိုခံစားပါ။
သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းမရှိသေးပါ။ အကောင့်၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ရက်မရှိဘဲမည်သည့်ငွေပမာဏအတွက်မဆိုငွေပြန်အမ်းငွေကိုရယူပါ။ ဆုများသည်အကောင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏ငွေပြန်အမ်းငွေကိုမည်သည့်ငွေပမာဏအတွက်မဆိုရွေးရန်သို့မဟုတ်မည်သည့်ဘဏ်အကောင့်သို့မဆိုလွှဲပြောင်းနိုင်သည်။
အတိုးနှုန်းမရှိပါ အပေါင်ပစ္စည်းမ ချေးငွေမလိုပါ အကြွေးစစ်ဆေးစရာမလိုပါဘူး ကြွေးမြီဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမရှိပါ
7. ဘဏ်အကောင့်သို့တိုက်ရိုက်အပ်နှံခြင်းဖြင့်ငွေသားပြန်အမ်းငွေကိုရွေးပါ။ သင်၏ cashback ၏ငွေကြေးတန်ဖိုးအပြည့်ကိုကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်ဘဏ်စာရင်းတွင်မဆိုသင်လွှဲပြောင်းနိုင်သည်။ သင်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဤနည်းဖြင့်ငွေပြန်အမ်းငွေကိုရွေးနိုင်သည်။
၈ ။ သင်၏ cashback ဆုများကိုထုတ်ယူခြင်းသည်လွယ်ကူပြီးသင့်ဘဏ်စာရင်းသို့နည်းလမ်းပေါင်း ၆၀ ကျော်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ သင်၏ငွေကိုဘဏ်အကောင့်သို့တိုက်ရိုက်ရယူပါ။
၉.၀% အတိုး သင်၏ ၀ ယ်ယူမှုအားလုံးကိုအတိုးရာခိုင်နှုန်းသုညဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
၁၀။ နိုင်ငံခြားငွေပေးငွေယူခမရှိပါ။ တိုင်းပြည်ပြင်ပမှာခရီးသွားနေပါသလား နိုင်ငံခြားငွေနဲ့တစ်ခုခုဝယ်တာလား သင်သည်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင်ငွေပေးချေစရာမလိုဘဲ ၀ ယ်နိုင်သည်။
11. $0နှစ်စဉ်ကြေး ပထမနှစ်အတွက်၊ ပြီးနောက် $ 295 ။
၁၂ ။ သတ်မှတ်ထားသော ၀ ယ်ယူမှုများသည်ပျက်စီးခြင်း၊ ခိုးခြင်း၊ သို့မဟုတ်“ မတော်တဆနှင့်မတော်တဆခွဲခွာခြင်းကိုတားဆီးရန်” ရက်ပေါင်း ၁၂၀ အတွက်အကျခံပါသည်။ တောင်းဆိုမှုနှုန်းအထိ $ 120M နှင့်အကောင့်နှုန်း $ 100 အထိရရှိနိုင်ပါပြီ။
၁၃။ တိုးချဲ့ထားသောအာမခံကာကွယ်မှု - အာမခံသက်တမ်းသုံးနှစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောအရည်အချင်းပြည့်မီသောပစ္စည်းများသည်ထိုအာမခံများကိုနောက်ထပ်တစ်နှစ်ထပ်တိုးနိုင်သည်။ တောင်းဆိုမှုတစ်ခုစီအတွက်အများဆုံးဒေါ်လာ ၁၀၀ မီလီယံနှင့်အကောင့်တစ်ခုစီအတွက်ဒေါ်လာ ၅၀ အထိရနိုင်သည်။
၁၄ ။ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလုပ်ဆောင်မှုအတွက်အချိန်နှင့်တပြေးညီလိမ်လည်မှုကိုစောင့်ကြည့်သည်။ သင့်အကောင့်ရှိခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက်သင့်ကိုတာဝန်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
၁၅။ Auto Rental Collision Damage Waiver: သင်ငှားရမ်းသည့်ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ပိုင်အာမခံကိုငြင်းဆန်နေသရွေ့သင့်လျော်သောငှားရမ်းထားသောမော်တော်ယာဉ်များသည်ခိုးမှုနှင့်ထိခိုက်မှုများကိုခံရမည်။ ငှားရမ်းခအားလုံးကို“ Cash Back Business Credit Card” ကို အသုံးပြု၍ ပေးရမည်။
၁၆ ။ ဝယ်ယူမှုအကာအကွယ်၊ တိုးချဲ့ထားသောအာမခံ၊ ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးမှုပြန်လည်ပေးဆပ်ခြင်း၊ ခရီးစဉ်ဖျက်သိမ်းခြင်း / အနှောင့်အယှက်ပေးမှုအာမခံ၊
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ VIP ကုသမှု
၁၇ ။ အသင်းဝင်အတွေ့အကြုံများဟုလည်းခေါ်သည်၊ ၎င်းသည်အားကစား၊ တေးဂီတနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်များအတွက်ကြိုတင်ရောင်းချခြင်းလက်မှတ်များအပြင်သီးသန့်အတွေ့အကြုံအချို့ရရှိစေသည်။
၁၈။ ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်အရေးပေါ်အကူအညီပေးရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ - ခရီးသွားနေစဉ်အမျိုးမျိုးသောအရေးပေါ်အကူအညီအတွက်ကဒ်၏နောက်ဘက်ရှိနံပါတ်ကိုခေါ်ဆိုပါ။ ရရှိသော ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်တတိယပါတီအခကြေးငွေများကျသင့်လိမ့်မည်။
၁၉။ Priority Pass အသင်း ၀ င်ကိုရွေးချယ်ပါ။ အသင်း ၀ င်အနေဖြင့်ကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းရှိလေဆိပ်နားခန်းပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်နှင့်စားသောက်ဆိုင်များကိုပါ ၀ င်သည်။ ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူနှင့် guests ည့်သည်နှစ် ဦး သည်အခမဲ့ ၀ င်နိုင်သည်။
၂၀။ ဇိမ်ခံဟိုတယ်နှင့်အပန်းဖြေစခန်း: ပါ ၀ င်သည့်ဟိုတယ်များနှင့်အပန်းဖြေစခန်းများတွင်အခန်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ နေ့စဉ်နှစ်ယောက်အတွက်နံနက်စာနှင့်အထူးလက်ဆောင်များအပါအ ၀ င်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များကိုပေးသည်
၂၁။ အွန်လိုင်းအကောင့်ဝင်ခွင့် ၂၄/၇ - အကောင့်လုပ်ဆောင်မှုသတိပေးချက်များရရှိရန်၊ ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာရွေးချယ်မှုများကိုကြည့်ပါ၊ အတိတ်အကောင့်ထုတ်ပြန်ချက်များနှင့်အခြားအရာများကိုပြုလုပ်ရန်သင်၏အကောင့်ကို online တွင်စီမံပါ။
၂၂ ။ WTE ကိုယ်စားလှယ်များသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်အထူးလေ့ကျင့်ထားပြီးသင်၌ရှိနိုင်သောမည်သည့်မေးခွန်းများကိုမဆိုဖြေဆိုရန်ရနိုင်သည်။
၂၃။ အခမဲ့ ၀ န်ထမ်းကတ် ၁၀၀ ၁ ။ သင်၏ ၀ န်ထမ်းများအားဝယ်ယူမှုအားလုံးတွင် ၉၅% ငွေပြန်အမ်းရန်ရရန်လွယ်ကူသောအသုံးစရိတ်နည်းလမ်းကိုပေးပါ။ ၀ န်ထမ်းကတ် ၁၀၀ အထိအခမဲ့ရနိုင်ပြီး၎င်းတို့အတွက်တစ် ဦး ချင်းသုံးစွဲငွေကန့်သတ်ချက်ကိုလည်းသတ်မှတ်နိုင်သည်။ သငျသညျန်ထမ်းကဒ်များကိုပိုမိုလိုအပ်ပါကသင်သည်အုပ်စုခွဲအကောင့်တစ်ခုတောင်းဆိုနိုင်သည်။
၂၄ ။ ၀ ယ်ယူမှုမှရရှိသော ၀ င်ငွေအားလုံးနှင့် ၀ န်ထမ်းများ၏အသုံးစရိတ်ကိုစစ်ဆေးပါ။ ဝန်ထမ်းကဒ်များအတွက်စိတ်ကြိုက်အသုံးစရိတ်ကန့်သတ်ချက်ကိုသတ်မှတ်ပြီးချက်ချင်းဆိုသလိုငွေပေးချေမှုကိုကြည့်ပါ။ ဝယ်ယူမှုနှင့်ငွေပေးချေမှုများပြုလုပ်ရန်၊ အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုပြန်လည်စစ်ဆေးရန်နှင့်ပြanyနာများကိုဖြေရှင်းရန်အကောင့်မန်နေဂျာကိုခန့်ထားပါ။
၂၅ 'Cash Back Business Credit Card' အရောင်းပြခန်း: ထမင်းစားချိန်ကြိုတင်မှာကြားခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောခရီးသွားသတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေခြင်းကဲ့သို့သောအရေးပေါ်မဟုတ်သောအကူအညီများကိုတောင်းဆိုပါ။
၂၆ WTE ပလက်ဖောင်း: သငျသညျပိုမို cashback ဝင်ငွေနိုင်ရှိရာမိတ်ဖက်ကုန်သည်သန်းပေါင်းများစွာကိုရှာပါ။
အဆင့် ၁: ဆက်သွယ်ပါ WTE.
အဆိုပါ join WTE အသင်း ၀ င်ပြီးသင့်အကောင့်ကိုသတ်မှတ်ပါ။
အဆင့် ၂: ဝယ်ယူပါ။
ပုံမှန်အတိုင်း ၀ ယ်ယူမှုများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ပြီးငွေ ၉၅% ကိုပြန် ၀ ယ်ပါ။
အဆင့် ၃ ။
သင်၏ရရှိသောငွေကိုဘဏ်ငွေလွှဲဖြင့်ပြန်လည်ပေးဆပ်ပါ။ အမှန်တကယ်ငွေပြန်ယူပါ။ သင်၏အမှာစာအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ငွေ ၉၅% ပြန်လည်ရရှိပါမည်။ အမှတ်များမရှိ၊ ကူပွန်များ၊ ကုန်သွယ်ရေးခရက်ဒစ်များသာငွေသား!
မေးလ်ထဲမှာစစ်ဆေးမှုများကိုစောင့်နေစရာမလို။ သင်၏ငွေပြန်အမ်းငွေလွှဲမှုကိုသင်၏ဘဏ်စာရင်းသို့ ၂၄ နာရီမှ ၇၂ နာရီအတွင်းရောက်ရှိပါမည်။
သင်ကတဆင့်ဝယ်ယူမှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများလုပ်သည့်အခါ WTE, WTE သင့်ရဲ့အသုံးစရိတ်ကိုထေမိအောင်ရောင်းအားအသစ်ရအောင်ကူညီမယ်။ ထို့နောက်သင်၏ဘဏ်စာရင်းမှရရှိသော ၀ င်ငွေ၏ ၉၅% ကိုငွေပြန်အမ်းပေးမည်။ သင်၏ cashback ဆုကို 95% အာမခံထားသည် WTE သင့်ကိုယ်စားအရောင်း ၀ င်ငွေရရှိရန်လိုအပ်သောအလုပ်၏ ၁၀၀% ကိုလုပ်လိမ့်မည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ ၀ ယ်လျှင်၊ ဒေါ်လာ ၁၀၀,၀၀၀ ၏ ၉၅% ကိုသင်ပြန်ရလိမ့်မည်၊ ၎င်းမှတစ်ဆင့်ရောင်းအားအသစ်မှတစ်ဆင့်ဒေါ်လာ ၉၅K ဖြစ်သည်။ WTE. WTE သငျသညျရောင်းအားဝင်ငွေ $ 100K generate ကူညီခြင်းနှင့်ငါတို့ငွေပေးငွေယူအခကြေးငွေအဖြစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ငွေသားဝင်ငွေ၏ 5% နုတ်ပါလိမ့်မယ်။ ရရှိသောရောင်းအားမှရရှိသော (၀ င်ငွေ၏ ၉၅%) ကိုသင်၏ဘဏ်အကောင့်သို့လွှဲပြောင်းပေးလိမ့်မည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ဒေါ်လာ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၀ ယ်ခြင်း / ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ပါကဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံ၏ ၉၅% ကိုပြန်လည်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၀ င်ငွေသစ်မှတစ်ဆင့်ဒေါ်လာ ၉.၅ သန်းဖြစ်သည်။ WTE။ တစ်နည်းပြောရရင်တော့, WTE သငျသညျရောင်းအားဝင်ငွေ $ 10M ထုတ်လုပ်ရန်ကူညီပေးပါမည်နှင့်ငါတို့ငွေပေးငွေယူအခကြေးငွေအဖြစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ငွေသားဝင်ငွေ၏ 5% နုတ်။ သင့်အတွက်ရရှိသောအရောင်း ၀ င်ငွေ၏ ၉၅% ကိုသင်၏ဘဏ်အကောင့်သို့လွှဲပြောင်းလိမ့်မည်။ ဒါကသင် 95% ငွေပြန်ရပုံဖြစ်ပါသည် ဝယ်ယူမှုတိုင်းတွင်သင်၏စီးပွားရေးအတွက် WTE.
သင်၏လစဉ်အသုံးစရိတ်သည်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း၊ ၁၀၀ မီလီယံ၊ ၁၀ ဘီလျံဒေါ်လာထက်မပိုသည်ဖြစ်စေအရေးမကြီးပါ။
သငျသညျ 100% ရရှိရန် 95% အာမခံချက်ရှိပါတယ် သင်သုံးပြီးလုပ်တိုင်းဝယ်ယူမှုအတွက် cashback မှတဆင့် 'Cash Back Business Credit Card' WTE.
JOIN WTE NOW က